6 Zvino nomusi wesabata akanga achipfuura hake nomuminda yezviyo, vadzidzi vake vakanga vachitanha+ uye vachidya hura dzezviyo, vachidzipukuta nemaoko avo.+ 2 Vamwe vevaFarisi vakati: “Muri kuitirei zvisingabvumirwi nomutemo+ pasabata?”+ 3 Asi achipindura, Jesu akati kwavari: “Hamuna kumboverenga here zvakaitwa naDhavhidhi+ apo iye nevarume vaaiva navo vakanzwa nzara?+ 4 Mapindiro aakaita muimba yaMwari, akagamuchira zvingwa zvokuratidzira,+ akadya, akapa zvimwe varume vaaiva navo, zvisingabvumirwi nomutemo kuti zvidyiwe chero nomunhu upi zvake kunze kwevapristi chete?”+ 5 Zvino akaenderera mberi achiti kwavari: “Mwanakomana womunhu ndiye Ishe wesabata.”+ 6 Pane rimwe sabata+ akapinda musinagogi, akatanga kudzidzisa. Makanga muine mumwe murume akanga aine ruoko rworudyi rwakakokonyara.+ 7 Vanyori nevaFarisi vakanga vakanyatsomutarira+ kuti vaone kana aizorapa pasabata, kuti vawane nzira yakati yokumupomera.+ 8 Zvisinei, iye aiziva kufunga kwavo,+ asi akati kumurume aiva noruoko rwakakokonyara: “Simuka umire pakati.” Iye akasimuka akamira.+ 9 Jesu akabva ati kwavari: “Ndinokubvunzai, Zvinobvumirwa nomutemo here kuita zvakanaka+ kana kuita zvinokuvadza pasabata, kuponesa kana kuparadza mweya?”+ 10 Pashure pokunge atarira-tarira kwavari vose, akati kumurume wacho: “Tambanudza ruoko rwako.” Iye akaita saizvozvo, ruoko rwake rukaporeswa.+ 11 Asi vakapenga kwazvo, vakatanga kutaurirana pamusoro pezvavangaita Jesu.+ 12 Nemazuva aya iye akaenda mugomo kunonyengetera,+ akaramba achinyengetera kuna Mwari usiku hwose.+ 13 Asi pakwakaedza, akashevedza vadzidzi vake, akasarudza vane gumi nevaviri pakati pavo, vaakatumidzawo kuti “vaapostora”:+ 14 Simoni, waakatumidzawo kuti Petro,+ naAndreya munun’una wake, naJakobho naJohani,+ naFiripi+ naBhatoromeyo, 15 naMateu naTomasi,+ naJakobho mwanakomana waArifiyosi, naSimoni anonzi “mushingairi,”+ 16 naJudhasi mwanakomana waJakobho, naJudhasi Iskariyoti, uya akazova mutengesi.+ 17 Zvino akaburuka navo, akamira panzvimbo yakati sandara, ipapo pakanga paine boka guru revadzidzi vake, nevanhu vazhinjizhinji+ vaibva muJudhiya mose neJerusarema nenyika iri pedyo negungwa yeTire neSidhoni, vakauya kuzomunzwa ndokuporeswa zvirwere zvavo.+ 18 Kunyange vaya vainetswa nemidzimu isina kuchena vakarapwa. 19 Boka rose revanhu raitsvaka kumubata,+ nokuti simba+ rakanga richibuda maari richivaporesa vose. 20 Zvino akatarira vadzidzi vake, akatanga kuti:+ “Munofara imi varombo,+ nokuti umambo hwaMwari ndohwenyu. 21 “Munofara imi munonzwa nzara+ iye zvino, nokuti muchaguta.+ “Munofara imi munosvimha misodzi iye zvino, nokuti muchaseka.+ 22 “Munofara imi pose pamunovengwa+ nevanhu, uye pose pavanokusiyai nokukuzvidzai vachirasa+ zita renyu semakaipa nokuda kwoMwanakomana womunhu. 23 Farai pazuva iroro musvetuke, nokuti, tarirai! mubayiro wenyu mukuru kudenga, nokuti izvozvo ndizvo zvinhu zvaigara zvichiitwa nemadzibaba avo kuvaprofita.+ 24 “Asi mune nhamo imi vapfumi,+ nokuti muri kuwana kunyaradzwa kwenyu zvakakwana.+ 25 “Mune nhamo imi makaguta iye zvino, nokuti muchava nenzara.+ “Mune nhamo, imi munoseka iye zvino, nokuti muchachema nokusvimha misodzi.+ 26 “Mune nhamo, pose apo vanhu vose vanotaura zvakanaka nezvenyu, nokuti zvinhu zvakadai ndizvo zvakaita madzitateguru avo kuvaprofita venhema.+ 27 “Asi ini ndinoti kwamuri imi makateerera, Rambai muchida vavengi venyu,+ muchiitira zvakanaka+ vaya vanokuvengai, 28 muchikomborera vaya vanokutukai, muchinyengeterera vaya vanokuzvidzai.+ 29 Anokurova padama rimwe,+ mupewo rimwe racho; uye anokutorera+ nguo yako yokunze, usamunyima kunyange nguo yomukati. 30 Ipa munhu wose anokukumbira,+ uye kune uya anokutorera zvinhu zvako usakumbira kuti zvidzorerwe. 31 “Uyewo, zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo saizvozvo.+ 32 “Zvino kana muchida vaya vanokudai, zvinokupai kukudzwa kwei? Nokuti kunyange vatadzi vanoda vaya vanovada.+ 33 Kana muchiitira zvakanaka vaya vanokuitirai zvakanaka, chokwadi zvinokupai kukudzwa kwei? Kunyange vatadzi vanoitawo izvozvo.+ 34 Uyewo, kana mukakweretesa vaya vamunotarisira kugamuchirawo kubva kwavari musingawani mubereko,+ zvinokupai kukudzwa kwei? Kunyange vatadzi vanokweretesa vatadzi vasingawani mubereko kuti vadzorerwewo izvozvo.+ 35 Asi, rambai muchida vavengi venyu nokuita zvakanaka nokukweretesa+ musingawani mubereko, musingatarisiri kudzorerwa chimwe chinhu; mubayiro wenyu uchava mukuru, uye muchava vanakomana voWokumusorosoro,+ nokuti iye ane mutsa+ kune vasingaongi nevakaipa. 36 Rambai muchiva nengoni, sezvo Baba venyu vaine ngoni.+ 37 “Uyezve, regai kutonga, uye hamuzombotongwiwo;+ uye regai kupa mhosva, uye hamuzombopiwiwo mhosva. Rambai muchisunungura, uye muchasunungurwawo.+ 38 Garai muchipa, uye vanhu vachakupaiwo.+ Vachadurura chiyero chakanaka muhomwe inovapo kana nguo yenyu yapetwa, chakatsindirwa, chakazunguzirwa uye chinofashukira. Nokuti nechiyereso chamuri kuyera nacho, vachakuyereraiwo nacho.”+ 39 Zvino akavaudzawo mufananidzo, achiti: “Bofu ringagona kutungamirira bofu here? Ose ari maviri haangawiri mugomba here?+ 40 Mudzidzi haapfuuri mudzidzisi wake, asi munhu wose anonyatsorayiridzwa achafanana nomudzidzisi wake.+ 41 Saka unotarisirei kabanzu kari muziso rehama yako, asi usingaoni danda riri muziso rako?+ 42 Ungati sei kuhama yako, ‘Hama, rega ndibvise kabanzu kari muziso rako,’ asi iwe usingatariri danda riri muziso rako iro?+ Munyengeri! Tanga wabvisa danda riri muziso rako,+ ipapo uchanyatsoona mabvisiro aungaita kabanzu kari muziso rehama yako.+ 43 “Nokuti hapana muti wakanaka unobereka chibereko chakaora; zvakare hapana muti wakaora unobereka chibereko chakanaka.+ 44 Nokuti muti mumwe nomumwe unozivikanwa nechibereko chawo.+ Somuenzaniso, vanhu havatanhi maonde paminzwa, uyewo havacheki mazambiringa pagwenzi reminzwa.+ 45 Munhu akanaka anobudisa zvakanaka papfuma yakanaka+ yomwoyo wake, asi munhu akaipa anobudisa zvakaipa papfuma yake yakaipa; nokuti muromo wake unotaura zvinobva pazvizhinji zviri mumwoyo.+ 46 “Zvino, nei muchinditi ‘Ishe! Ishe!’ asi musingaiti zvinhu zvandinotaura?+ 47 Munhu wose anouya kwandiri, onzwa mashoko angu, oaita, ndichakuratidzai kuti akafanana naani:+ 48 Akafanana nomunhu aivaka imba, akachera, akadzika pasi chaipo, akaisa nheyo padombo guru. Naizvozvo, pakauya mafashamo,+ rwizi rwakarovera nesimba paimba iyoyo, asi rwakanga rusina kusimba zvokuizunungusa, nokuti yakanga yakanyatsovakwa.+ 49 Asi, uya anonzwa mashoko angu, orega kuaita,+ akafanana nomunhu akavakira imba yake paivhu pasina nheyo. Rwizi rwakarovera nesimba pairi, ikabva yangoputsika, uye imba iyoyo yakaparara zvachose.”+